Ukulungela ukuqaliswa kokuqaliswa kwe-SMARTLIVE MULTI SPORT Ukucwangciswa kunye nokubonakalisa i-Version Factory Updates yoPhicotho lweMveliso kunye nokuSasazwa kwi-IBC 2019-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcaster ye-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » Tedial ukuvula ii-SMARTLIVE MULTI SPORT Configurations kunye neZibonelelo zeeNkcukacha zeeNkcukacha zoPhicotho lweMveliso kunye nokuSasazwa kwi-IBC 2019
Tedial ukuvula ii-SMARTLIVE MULTI SPORT Configurations kunye neZibonelelo zeeNkcukacha zeeNkcukacha zoPhicotho lweMveliso kunye nokuSasazwa kwi-IBC 2019
Tedial Ukuqalisa ii-SMARTLIVE MULTI SPORT Configurations kwaye Ubonise ii-Update Factory Updates zoPhicotho lweMveliso kunye nokuSasazwa kwi-IBC 2019
Tedial izisombululo ezikhoyo kwiindawo nakwilifu
Malaga, Spain - 9th July 2019 - Tedial, isisombululo esizimeleyo sobuchwepheshe beMAM ye-teknoloji, siya kubonakalisa iimpawu ezintsha ezibalulekileyo kwiinkqubo zayo zokupasa, imidlalo yokuwonga ibhaso kunye nemicimbi yokuphila, SMARTLIVE, kwi-8.B44 kwi-IBC 2019. Inkampani iya kubonisa kwakhona ukuphuculwa kwayo Tedial I-Factory Xhosa 2019 ngokokuqala ngqa eYurophu.
IMISEBENZI YEZIMIDLALO ZEMIDLALO YAMANTSHA
Entsha kwi-IBC 2019, i-SMARTLIVE iya kufaka iinkqubo ze-MULTI SPORT, ezivumela abasebenzisi ukuba benze iziqulatho ezizenzekelayo ngokuzenzekelayo okanye ukucima ngokuzenzekelayo naluphi na uhlobo lwezemidlalo ngokukhawuleza kwaye lula. Ababhenkethi baya kubona ukwanda okwenyukayo kwinani lezinto ezigqwesileyo ezinokuthi i-SMARTLIVE ikwazi ukuvelisa ngokuzenzekelayo ngenxa yokwandiswa okukhulu kweentlobo zemidlalo. Oku kuluhlu oluphambili kuloluhlu lwezakhono zokukhula ngokukhawuleza. I-agnostic ngokupheleleyo kuzo zonke izifo zedatha, TedialInjini ye-metadata yenza kube lula ukufaka iinkqubo ezintsha kwiinkqubo njengoko kwaye kufuneka.
Ukongeza, i-SMARTLIVE kunye TedialI-Evolution MAM ngoku iquka imodyuli entsha evumela zonke iintlobo zomxholo ukuba zishicilelwe kunoma iyiphi intanethi yentlalo kwiskrini esinye kuphela. Inikwe amandla yenkqubo yokudala iiprogram zokushicilela ezentlalo ngqo ngaphakathi kwe-MAM, umxholo uquka iziqeshana, iziqulatho okanye iindaba zeendaba zembali njl. Oku kuya kuboniswa kwimilo kulo mboniso.
Tedial Kuya kubonisa kwakhona ubugcisa bezobugcisa kunye neNtetho. Ngokudibanisa iteknoloji ye-Speechmatics ye-Intelligence Speech Recognition (ASR) ne-SMARTLIVE, abaqhubi banokukhangela izimvo ezenziwe ngexesha lomdlalo wezemidlalo okanye umcimbi wokuphila, ngokuzenzekelayo ukudala indawo yeefayile kunye nokungenisa ifayile okanye ukuyila kwifolda yokulinda kwaye ngokwenza ngesandla intetho-yokubhaliweyo evela kumgca wokuhlaziya.
Ukubonelela abasebenzisi ngokufikelela ngokukhawuleza kokuqukethwe, Tedial iya kubonakalisa isisombululo sayo esitsha seS SMARTLIVE esingasetyenziselwa ngokukhawuleza phezulu kwendawo yokuvelisa imveliso yabathengi. Oku kubalulekileyo njengoko kunika abapapasho bezemidlalo ngesisombululo esiphezulu esinokunyuka kwaye siphume ngokukhawuleza. Kanye nale micimbi emitsha, Tedial iya kugxininisa inzuzo yezemali kunye nokusebenza kokusebenza kwe-SMARTLIVE zombini nakwilifu.
UEstas Mesas, i-CSO / i-CMO, Tedial uchaza ukuba, "Ezi zongezelelo zandul 'ukongeza ukuba amaqela okuvelisa akhulise ngokukhawuleza ukusebenza kwabo kunye nokuveliswa ngaphandle kokufuna ukunyusa, abashiye ixesha elingakumbi lokudala, njengamabali aququzelelwe ngabanye abaphucula amava ombukeli jikelele. I-SMARTLIVE ikwandisa ukusebenza kakuhle, ukuveliswa kunye nenzuzo kubasasazo bezemidlalo kunye neziganeko eziphilayo. Kwakhona kwenza ukuba izinto ezininzi zancitshwe ngokunciphisa iindleko ngaphandle kokuba zidibanise umgangatho wesisombululo sabo. Sibheke phambili ekuboniseni le micimbi kunye neenzuzo kwi-IBC 2019. "
Tedial I-Factory 2019
Inkampani iya kubonisa kwakhona Tedial Uhlobo lwe-2019 uphuculo lwexesha lokuqala kwiYurophu. Tedial I-Factory Version yindlela yokusebenza efanelekileyo kunye neendleko ezisebenzisekayo ezixhasa izigidi zeefayile ezifakwayo, ukuziguqula kwiinkqubo zokuhambisa, ukulungele ukuhanjiswa kwiiplatifti ezininzi ukusuka kwisikrini somsebenzisi omnye. Uhlaziyo lubandakanya, ukulawula i-'t-fly-fly 'yeeguqulelo ezizodwa, kubandakanywa ngaphambili, ukuthunyelwa kunye nokufakwa kwee-mid-roll; iimfuno zokuhanjiswa kweemvumelwano ezihambelana nokuthengiswa kwexesha; ukunika amandla ummeli ochanekileyo wokulungiswa kwe-IMF ohleliweyo kwiimidiya kunye neemplates, ngoko ke amaxesha eepisodes angaphathwa ngokucwangciswa komnye.
Ukusebenzisa i-Factory Factory kunye ne-HYPER IMF, ukuphumla kwayo kwiphepha lokugqibela kwe-IMF ngokuxhasa i-2018 SMPTE IMF imigangatho, Tedial Unokuxhasa kalula iiplatifomu ezisekhoyo kunye nezitsha, ukuhambisa umxholo kwisakhiwo esifanelekileyo kunye neengoma zomculo kunye nemibhalo engezantsi ngolwimi oluchanekileyo, kunye naziphi na izongezo ezongezelelweyo ezifunekayo (umdwebo / izithuthi) njl.
Njengengxenye TedialI-Evolution MAM ibonakalisa inkampani iya kubonisa kwakhona iimpawu ezintsha kwi-Evolution yemveliso ye-ISSTORM yesisombululo, esilawula ngokucacileyo amacandelo ahlukeneyo kumasebe nakwiindawo okanye efini, okokuqala ngqa eYurophu. ISSTORM ngoku iquka iinkalo ezininzi zokugcina izindleko ezibandakanya, ukuphucula ukudluliselwa phakathi kweendawo zokunciphisa iindleko zokudlulisa; kunye nokuphuculiswa kwemisebenzi yokuhamba kwamateyipu phakathi kobuchwepheshe bokunyusa ukwenziwa kobutyebi obangela ukunyuka kweendleko zokufuduka. ISSTORM nayo ixhasa ngoku Oracle ukugcinwa kwefu.
"Icandelo lenza inguqu enkulu," yongeza iMesas. "Sinikela iinkqubo ezinikezela ukudibanisa iimpawu ukulungiselela ukwenziwa komsebenzi kunye nokuphathwa kwimixholo kuwo onke amanqanaba kwindawo okanye efini ukuqinisekisa ukuba iinkqubo zisebenza ngokufanelekileyo ngokufuna iimfuno zabaxhasi ngamnye. Yiza uze usibone kwi-8.B44 uze ufumane okungakumbi. "
Cobalt Encoder Digital Nirvana IBC IBC2019 kuhlolwa kweendaba MULTI SPORT SMARTLIVE Iintetho kunye nemisrya Umxholo ophantsi i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC Tedial TVU Networks	2019-07-09
Previous: Iimpawu ze-Sony Pictures Post Production zinika iWebhu yeZandi ezithandekayo kwi-Spider-Man ™: kude nekhaya
next: I-K-Tek ibonisa i-KlassicPro Boom Poles